आज भारतमा ४७ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइदैं, यसरी प्राप्त गरेको थियो भारतले स्वतन्त्रता ! « Pen Nepal
आज भारतमा ४७ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइदैं, यसरी प्राप्त गरेको थियो भारतले स्वतन्त्रता !
Published On : 15 August, 2020 7:35 am By : पेननेपाल
काठमाडौं । काठमाडौं । आज ७४ औं भारत स्वतन्त्रता दिवस । हरेक वर्ष अगस्त १५ तारिखमा भारतमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ । सन् १९४७ अगस्त १५ तारिखमा भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो । यसै ऐतिहासिक दिनको सम्झना गरी भारतरभर उत्साहका साथ अगस्त १५ मा भारतीय स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिन्छ ।
स्वतन्त्र भारतका लागि सुवासचन्द्रबोस महात्मा गान्धीलगायतका नेताले अहिंसात्मक प्रदर्शन र नागरिक अवज्ञाको माध्यमबाट स्वतन्त्रता संग्राम गरेपछि भारत स्वतन्त्र भएको हो । भारतलाई स्वतन्त्र बनाउन बनेको विधान इण्डियन इण्डिपेण्डेन्स एक्ट सन १९४७ बेलायती संसद्ले पारित गरेर इण्डियन कस्न्टिच्युशनल एसेम्लीलाई भारतकोे संसदीय सम्प्रभुता प्रदान गरिएको थियो ।
भारतले संक्रमण काल पार गरेर संविधान जारी नगर्दासम्म बेलायती राजा जर्ज छैठौं नै भारतका राष्ट्रप्रमुख थिए । संविधानसभामार्फत बनेको भारतीय संविधान सन् १९५० मा जारी भएपछि भारतले पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको हो । स्वतन्त्रतापछि भारतीय नागरिक राजेन्द्रप्रसाद गणतन्त्र भारतका प्रथम राष्ट्रपति र जवहारलाल नेहरु प्रथम प्रधानमन्त्री भएका थिए । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा भारतभर झण्डोत्तोलन गरी परेडको आयोजना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने चलन छ ।